Fa Onyankopɔn Adwene Susuw Nneɛma Ho
Ɔwɛn-Aban—Nea Adesua Nsɛm Wom | December 15, 2002
KENKAN WƆ Albanian Arabic Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Hiligaynon Hungarian Igbo Indonesian Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Malagasy Malayalam Myanmar Norwegian Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Rarotongan Romanian Samoan Sepedi Shona Silozi Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Thai Tsonga Tswana Twi Ukrainian Urdu Vietnamese Zulu
NÁ September 14, 2002, yɛ da a owia abɔ na ewim yɛ hyew wɔ New York, U.S.A. Saa da no, amanaman ntam nnipakuw bi a wɔn dodow si 6,521 hyiaam wɔ Patterson Adesuabea ne Yehowa Adansefo afie foforo abien mu wɔ ɔmantam no mu. Nnipakuw no hyiaam hwɛɛ Ɔwɛn Aban Gilead Bible Sukuu adesuakuw a ɛto so 113 a na wɔrewie no. Adesuafo no fi nsase 14 so, na na wɔde asram anum a atwam no asiesie wɔn ho ama asɛmpatrɛw adwuma no wɔ aman 19 a wɔde wɔn bɛkɔ mu no mu.
Carey Barber a ɔwɔ ne mfirihyia 98 mu a ɔyɛ Yehowa Adansefo Sodikuw no muni no na ɔyɛɛ dwumadi no guamtrani. Ɔtwee adwene sii nneɛma a wɔnam Gilead Sukuu no so ayɛ wɔ bɛyɛ mfirihyia 60 a adi a emu na wɔasiesie nnipa mpempem pii ma wɔakɔyɛ asɛmpatrɛw adwuma no so. Onua Barber kae sɛ: “Ɛnyɛ asɛm a yɛreka agugu mu sɛ mfaso kɛse afi ntetee foforo a wɔanya no mu aba. Ahobrɛasefo ɔpehaha pii na wɔahyira wɔn nkwa so ama Yehowa wɔ wiase nyinaa agye ne nokware som atom na wɔde ɔsom kronn rema no esiane mmoa a asɛmpatrɛwfo a wɔatete wɔn de ama wɔn nti.”
Ansa na adesuafo no mu pii rebɛkɔ Gilead no, na wɔada no adi sɛ wɔpɛ sɛ wɔtrɛw wɔn som adwuma mu. Ná awarefo bi de bɛboro afe biako asua Mandarin kasa sɛnea ɛbɛyɛ a wobetumi aka asɛm no akyerɛ Chinafo pii a wɔte wɔn kurom wɔ Canada no. Awarefo foforo ankasa fii ase suaa Albania kasa, na bere kɔɔ so no, wotu kɔtraa Albania sɛnea ɛbɛyɛ a wobedi anigye kɛse a wɔreda no adi wɔ Bible ho wɔ hɔ no ho dwuma. Adesuakuw no mufo foforo fi Hungary, Guatemala, ne Dominican Republic, nsase a na wɔatu akɔtra hɔ resom wɔ baabi a na Onyankopɔn Asɛm akyerɛkyerɛfo ho hia kɛse wɔ hɔ no.
Afei, ansa na wɔrebɛkɔ mmeae a wɔama wɔn dwumadi wɔ Afrika, Europa Apuei fam, Amerika Mfinimfini ne Anafo fam, ne Mediterranea Supɔw Apuei fam akyirikyiri no, wɔhyɛɛ adesuafo a wɔrewie no nyinaa nkuran sɛ wonsusuw Onyankopɔn ho wɔ biribiara a wɔyɛ mu.
Onua Barber nnianim kasa no akyi no, ɔtoo nsa frɛɛ Maxwell Lloyd a ɔyɛ United States Baa Boayikuw no muni no ma ɔbɛkasae. Ɔkasa faa asɛmti “Fa Onyankopɔn Adwene Susuw Nneɛma Ho” ho. Onua Lloyd twee adwene sii Dawid ne Onyankopɔn Ba Yesu nhwɛso ahorow so. (1 Samuel 24:6; 26:11; Luka 22:42) Bere a ɔkasafo no kaee adesuafo no sɛ asram anum a wɔde asua Bible no ama wɔanya ntetee a ɛbɛma wɔde Onyankopɔn adwene asusuw nneɛma ho no, obisae sɛ: “Sɛ mo ne nkurɔfo reyɛ Bible adesua wɔ mo dwumadibea foforo no mu a, so mobɛboa wɔn ma wɔde Onyankopɔn adwene asusuw nneɛma ho?” Na ɛdefa afotu a adesuafo no de bɛma afoforo ho no, otuu wɔn fo sɛ: “Nka sɛ, ‘Sɛnea m’adwene yɛ me no, misusuw sɛ . . . ’ Mmom no, boa wɔn ma wonhu Onyankopɔn adwene wɔ asɛm no ho. Sɛ wofa saa kwan yi so a, wobɛyɛ nhyira ankasa ama wɔn a wo ne wɔn bɛbɔ wɔ wo dwumadibea no.”
Nea odii hɔ wɔ dwumadi no mu ne Gerrit Lösch a ɔyɛ Sodikuw no muni no. Bere a ɔrekasa afa asɛmti “Medi W’akyi” ho no, ɔtwee adwene sii mmere pii a Yehowa ka kyerɛɛ n’asomfo anokwafo sɛ, “Medi w’akyi” no so. (Genesis 26:23, 24; 28:15; Yosua 1:5; Yeremia 1:7, 8) Wɔ yɛn bere yi so no, sɛ yɛkɔ so di nokware a, yebetumi anya Yehowa mu ahotoso saa ara. Onua Lösch daa no adi sɛ: “So wudwen ho sɛ ebia wubenya nnipa ne wɔn asua Bible no anaa? Kae sɛ, Yehowa kae sɛ, ‘Medi w’akyi.’ So wudwen sɛnea wubenya honam fam nneɛma a ɛsɛ ahwɛ wo ho? Yehowa kae sɛ: ‘Merennyaw wo, nanso merempa wo da.’” (Hebrifo 13:5) Onua Lösch de asɛm no baa awiei denam adesuafo no a ɔkaee wɔn sɛ Yesu hyɛɛ n’akyidifo anokwafo bɔ sɛ ɔbɛka wɔn ho wɔ asuafoyɛ adwuma no mu so.—Mateo 28:20.
Ná Lawrence Bowen a ɔyɛ Gilead kyerɛkyerɛfo no asɛmti ne “So Wubenya Ahobammɔ Wɔ Ogya no Mu?” Ɔkae sɛ esiane nsɛmpɔw a ɛsɔree wɔ Eden no nti, wɔn a wɔpɛ sɛ wɔde ɔsom kronn ma Yehowa nyinaa ahyia ɔhaw ahorow, na ɛtɔ mmere bi a wohyia sɔhwɛ ahorow a emu yɛ den. Ɔhyɛɛ adesuafo a wɔrewie no nkuran sɛ wonni Yesu a ɔnam ne ho a ɔde too Yehowa so koraa no so nyaa nokware ahobammɔ na ɔpenee sɔhwɛ ahorow a emu yɛ den a Yehowa maa kwan ma ɛbaa ne Ba ɔsoɔmmerɛfo a ɔyɛ pɛ no so no nhwɛso akyi. (Hebrifo 5:8, 9) Yebetumi de Yehowa atoto obi a ɔnan sika kɔkɔɔ a ɔde si ogya a ano den fata pɛpɛɛpɛ so yiyi emu fĩ no ho. Nokwarem no, gyidi a wɔasɔ ahwɛ wɔ ogya mu som bo koraa sen sika kɔkɔɔ a wɔayiyi mu. Dɛn ntia? Onua Bowen kae sɛ: “Efisɛ gyidi a wɔasɔ ahwɛ tumi gyina sɔhwɛ biara ano, na esiesie yɛn ma yegyina ‘kodu awiei.’”—Mateo 24:13.
Gilead kyerɛkyerɛfo foforo, Mark Noumair bisae sɛ: ‘So Wɔbɛpɛ W’asɛm?’ Ɔde n’asɛmti no gyinaa nsɛm a ɛwɔ 1 Samuel 2:26, NW, a ɛka Samuel ho asɛm sɛ “na Yehowa ne nnipa nyinaa pɛ n’asɛm” no so. Bere a Onua Noumair a ɔde bɛboro mfirihyia du yɛɛ asɛmpatrɛw adwuma wɔ Afrika no kaa Samuel nhwɛso no ho asɛm wiei no, ɔkae sɛ: “Onyankopɔn betumi apɛ mo nso asɛm denam nokwaredi a mode bɛkɔ so akura adwuma a Onyankopɔn de ama mo sɛ monyɛ no mu no so. Wama mo asɛmpatrɛw adwuma a ɛsom bo.” Afei Onua Noumair hyɛɛ adesuafo a wɔrewie sukuu no nkuran sɛ wommu wɔn adwuma no sɛ adwuma kronkron a Onyankopɔn de ama wɔn, na wɔmfa Onyankopɔn adwene nyɛ adwuma ahorow a wɔde ama wɔn no.
Wɔ sukuu bere no mu no, adesuafo no nyaa hokwan ahorow pii wɔ dapɛn awiei de kaa “Onyankopɔn ade kɛse” a ɛwɔ Bible mu no ho asɛm kyerɛɛ nkurɔfo a wɔwɔ mpɔtam hɔ no. (Asomafo no Nnwuma 2:11) Nokwarem no, wotumi kaa ade kɛse yi ho asɛm wɔ kasa horow du mu. Gilead kyerɛkyerɛfo foforo, Wallace Liverance, bisabisaa adesuafo no bi nsɛm ma wɔkaa wɔn suahu ahorow wɔ asɛmti a ɛne “‘Onyankopɔn Ade Kɛse’ Kanyan Nkurɔfo Ma Wɔyɛ Ade” no mu. Ɔkae sɛ: “Honhom no kanyan wɔn a na wɔwɔ abansoro so wɔ Pentekoste no ma wɔkaa ‘Onyankopɔn ade kɛse’ ho asɛm. Honhom koro no ara yɛ adwuma wɔ Onyankopɔn asomfo anokwafo nyinaa so nnɛ.” Akanyan ebinom ma wɔasua kasa foforo a wɔn botae ne sɛ wɔde bedi nnipa foforo pii adanse.
Onyankopɔn Adwene a Wɔde Susuw Nneɛma Ho Ho Afotu a Mfaso Wɔ So
Wɔ nnianim kasa ahorow no akyi no, Gary Breaux ne William Young, a wɔyɛ United States baa dwumadibea adwumayɛfo no bisabisaa nsase a asɛmpatrɛwfo resom wɔ so mprempren so baa boayikuw ahorow mufo ne awarefo bi a wɔde bɛboro mfirihyia 41 yɛɛ asɛmpatrɛw adwuma no nsɛm. Ade biako a wɔhyɛɛ no nsow ne sɛ: “Wɔn a wɔnhwehwɛ nneɛma pii no yɛ adwuma no kyɛ. Wɔde wɔn adwene si nea enti a wɔbae so. Wonim sɛ wɔbɛkaa asɛmpa no, na wɔrebɛboa nkurɔfo ma wɔahu Yehowa.”
Sodikuw no muni foforo, David Splane, maa ɔkasa a n’asɛmti ne “Morenkɔ Akyiri!” de dwumadi no baa awiei. Dɛn na na ɔrepɛ akyerɛ bere a saa bere no na wɔde adesuafo 46 no nyinaa rekɔ nsase a ɛwɔ wiase nyinaa so no? Ɔkyerɛkyerɛɛ mu sɛ: “Ɛmfa ho baabiara a wowɔ wɔ asase so no, bere a wokɔ so di nokware no, wobɛtra Onyankopɔn fie daa.” Yiw, ɛmfa ho baabiara a Kristofo anokwafo nyinaa te no, wɔresom wɔ Onyankopɔn honhom fam asɔrefie, anaa ofie kɛse a wɔde sii hɔ bere a wɔbɔɔ Yesu asu wɔ afeha a edi kan no fã bi mu. (Hebrifo 9:9) Hwɛ awerɛkyekye a ɛyɛ sɛ atiefo no hui sɛ Yehowa bɛn n’asomfo anokwafo a wɔwɔ asase so nyinaa no! Sɛnea na Yesu ho hia Yehowa bere a na ɔwɔ asase so no, saa ara na yɛn nyinaa, ne ɔsom a yɛde ma No no ho hia No, ɛmfa ho baabi a yɛwɔ no. Enti ɛdefa ɔsom ho no, yɛne yɛn ho yɛn ho ntam kwan nware, na yɛne Yehowa ne Yesu nso ntam kwan nware.
Bere a wɔde nkyia a efi wiase nyinaa mae, de adesuafo no dwumadi maa wɔn, na wɔkenkan krataa a adesuafo no de kyerɛɛ anisɔ wɔ ntetee a wɔanya wɔ Gilead no ho wiei no, oguamtrani no de dwumadi no baa awiei anigye so. Ɔhyɛɛ asɛmpatrɛwfo foforo no nkuran sɛ wɔnkɔ so nyɛ wɔn adwuma pa no, na wɔmma wɔn ani nnye Yehowa som adwuma no mu.—Filipifo 3:1.
[Adaka wɔ kratafa 23]
ADESUAKUW NO HO NSƐM
Aman dodow a wofi so: 14
Aman dodow a wɔama wɔn hɔ dwumadi: 19
Adesuafo no dodow: 46
Mfe a wɔadi nkyekyɛm: 35.0
Mfe dodow a wɔadi wɔ nokware no mu: 17.2
Mfe dodow a wɔayɛ bere nyinaa som adwuma no nkyekyɛm: 13.7
Ɔwɛn Aban Gilead Bible Sukuu Adesuakuw a Ɛto so 113 a Wɔawie Wɔn Adesua
Wɔahyehyɛ akuw no fi anim kɔ akyi, na kuw biara mu din no fi benkum kɔ nifa, wɔ ase hɔ din no mu.
Share Share Fa Onyankopɔn Adwene Susuw Nneɛma Ho
w02 12/15 kr. 23-25
Yesu Awo—Ɔkwan a Ɛfaa So Bae ne Nea Enti a Ɛbaa Saa
Yesu Awo Ho Kyerɛwtohɔ Mu Asuade Ahorow
‘Onyankopɔn Bɛbɛn Mo’
So Wunim Safan ne N’abusua Ho Nsɛm?
Monna Ɔdɔ Adi Nkyerɛ Mo Ho Wɔ Abusua no Mu
Afe 2002 Ɔwɛn-aban Mu Nsɛm A Wɔahyehyɛ
Text Baabi a wubetumi atwe nneɛma akenkan ƆWƐN-ABAN—NEA ADESUA NSƐM WOM December 15, 2002
Share Share ƆWƐN-ABAN—NEA ADESUA NSƐM WOM December 15, 2002
ƆWƐN-ABAN—NEA ADESUA NSƐM WOM December 15, 2002